Daawo: Ciidamada DF Oo Xiray Xaruntii Muranka » Axadle Wararka Maanta
Daawo: Ciidamada DF oo xiray xaruntii muranka
By Abdiwahab Ahmed	 Last updated Aug 31, 2021
Muqdisho (Axadle) – Dowladda Soomaaliya ayaa shalay albaabada isugu dhufatay xarun dadka jirkooda lagu qurxiyo oo dhawaan laga furay Caasimadda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya taasoo dood badan ka dhex dhalisay baraha Bulshada.
Ciidamo ka socda booliska ayaa xoog ku galay xaruntaas oo ku taalay agagaarka Isgoyska Dabka ee Muqdisho, waxayna amar ku bixiyeen in xarunta la xiro.
Xiritaanka xarunta ayaa timid kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal muujinayo shaqada xarunta ay qabato oo ah qallimo dadka jirkooda wax looga badalayo, sida dumarka faruuryaha loo weyneynayo iyo qeybaha kale ee jirka.
US and British ambassadors warn of electoral violence in…
Xarunta la xiray ayaa lagu eedeeyey inay magaalada kusoo kordhisay waxyaabo ka baxsan Diinta Islaamka, Dhaqanka Soomaalida isla markaasna halis ku ah caafimaadka, iyadoo la sheegay in kiimikada dadka lagu durayo ay dhibaato ku tahay bini’aadamka.
Dhawaan ayey aheyd markii xafiiska Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in Dowladda Soomaaliya aysan ogolaan doonin in dumarka Soomaaliyeed lagu sameeyo qalliino aysan ogayn natiijadooda waxay noqon karto.
Laamaha Amniga ayaa lagu wargeliyey inay gacanta kusoo dhigaan milkiilaha xarunta isla markaasna la horkeeno cadaaladda, inkastoo aan weli la ogeyn in la xiray milkiilaha xarunta oo ku sugan Muqdisho.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada, gaar ahaan kuwa Soomaalida qabsaday muuqaalada gabdho ku faanayo in faruuryaha loo weynayey iyo qeybaha dambe taasoo ay shari ahaanteeda dood ka dhex dhalisay bulshada.
(This story Daawo: Ciidamada DF oo xiray xaruntii muranka has not been edited by Axadle workers and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the post for any purpose.